Maxaad Ka Taqaannaa Taariikhda Boqorkii Cuudka Soomaaliyeed Marxuum Xudaydi? | Aftahan News
Maxaad Ka Taqaannaa Taariikhda Boqorkii Cuudka Soomaaliyeed Marxuum Xudaydi?
April 8, 2020 | Filed under: Wararka | Posted by: Mursal
London(Aftahannews):- Allaah ha u naxariistee, waxaa Magaalada London ku geeriyooday, fannaan, laxamiiste, Maxamuud Ismaaciil Xuseen (Xudaydi) oo loo yaqaannay Boqorkii Cuudka, maadaama uu ku xeeldheera tumiddiisa.
BOQORKII CUUDKA SOOMAALIYEED Maxamuud Ismaaciil Xuseen (Xudaydi)
Xudeydi ayaa muddooyiinkii u dambeeyay la xanuunsanaa fayraska corona oo fara ba’an ku haya guud ahaa caalamka. Xudaydi waxa uu dhashay, 1928-kii, waxaana uu jirey 92 sano, isagoo ku dhawaad qarnigaa ahaa tiir aan liicin oo uu leeyahay fanka Soomaalidu, waxaa uuna aad can ugu ahaa tumidda muuusigga, gaar ahaan cuudka.
Waxa uu ku dhashay magaalada Berbera, waxaana uu dhallinyaronimadiisii ku soo qaatay magaalada Cadan ee dalka Yemen, ka hor intii uusan u soo laaban Somaaliya. Waxa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa aasaasayaasha fanka casriga ee Soomaalida.
Sidee ayuu Fanka ku bilaabay?
Maxamuud Ismaaciil Xuseen ‘Xudaydi ayaa fanka soo bilaabay isaga oo ay da’diisu tahay 18 sano,balse uu aad u soo shaac baxay markii ay da’diisu ahayd 20 jir.
Wareysi uu BBC siiyay sanadkii 2018 ayuu Xudaydi ku sheegay in fanka uu ka soo bilaabay magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu tartan uga qayb galay.
Maxamuud’Xudaydi ayaa sidoo kale sheegay in maclimiin badan uu lahaa oo markii uu fanka ku soo biiray ka gacan qabtay. “Maclinkeyda waxaa la oran jiray Cabdi Xandule Shanle reer Burco ayuu ahaa, maclinkeygii labaad waxaa uu ahaa Xasan Nahaari”, ayuu yiro Xudaydi.
Xudaydi ayaa sheegay in Kontameeyadii uu magaalada Cadan kaga qeyb galay tartan dhanka fanka ah oo ay ka qeybgalayeen fanaaniin ka soo kala jeeda dalal kala duwan, taasi oo uu sheegay in uu guul ka soo hoyi’yay.
Xudaydi ayaa Yeman ka oso laabtay sanadii 1960 halkasi oo uu fanka ka sii waday. Alle ha u naxariistee Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudaydi) waxaa uu sheegay in tumidda Kaban uu ku dhiirigaliyay abwaankii waynaa ee Cabdulahi Qarshe.
“Cabdulahi Qarshe bilowguu Durbaanka ayaan u tumi jiray marka isaga ayaa igu dhiirigaliyay oo waxaa uu igu yiri aabahaa muxuu kuu iibiyay markii uu iskuulka ku geynayay,markaas ayaan ku iri Buuq iyo Qalin,markas ayuu igu yiri Kaban soo iibso”, ayuu yiri Xudaydi mar u BBC u waramay 2018.
Allaah ha u naxariistee Xudaydi kuma ekeyn oo kali ah tumidda kaban, balse waxaa uu sameeyay heeso badan oo wadani iyo Jaceyl isugu jira.
Heesaha waddaniga ee uu sameeyay waxaa ka mid ah hees la yiraahdo Dhalad oo ah hees uu calanka u qaaday markii xorriyadda ay qaateen gobolada waqooyi ee imika Soomaliland loo yaqaano.
Waxa ka mid ah miraha heestaasi, Calanyahow dhayal ma aha dhidibkaaguye, dhaaxaan aawadaa dhib soo maraye.
Dhanka heesaha Jaceylka, Xudaydi waxaa uu sameeyay heeso badan waxaana sida u sheegay ugu caansa heesta Raaxeeye. “Tan ugu qaalisan waa heesta Raaxeeye anaa sameeyay marka heesta Raaxeeye badda dhaantada weeye”, ayuu yiri.
Maxamuud Xudaydi maadaama uu aad caan ugu ahaan tumidda Kaban ama Cuudka waxa loo yaqaano waxaa jira dad badan oo caan ah oo isaga uu baray Kaban. Abwaanka oo BBC ay weydiisay dadka ka aflaxay ee uu baray Kaban ayaa yiri: waxaa ka mid ah Cumura Dhuule, ninkii la oran jiray Goobe iyo dad aanan koobi kareyn
Abwaanka ayaa sidoo kale sheegay in waligii uu jeclaa in dadka dhalinyarada ah uu sii baro tumidda Kaban. “Caruur yaryar ayaan kabanka baraaiyo dad waawayn iyo dumarkii oo la yiri ragga is dhexgali mayn ayaan gabdho iyaga u tuma baray”, ayuu yiri.
Alle ha u naxariistee Xudaydi ayaa waxaa ahaa nin fanaaniinta ku booriya in aysan siyaasadda dhexgalin. Waxaa uu sheegay in fanaaniinta imika jira uu mar walba ka waaniyo in aysan qaadin heesaha siyasadda marka laga reeb kuwa waddaniga ee dalka lagu ammaanayo.
Fanaanta Soomaaliyeed ayaa geerida Alle ha u naxariistee Xudaydi si wayn uga hadlay. Waxa ay BBC la hadashay qaar ka mid ah fanaantii ay isla so shaqeeyeen.
Fanaanadda Hibo maxamed (Hibo nuura) ayaa ku tilmaamtay Xudeyda in uu ka mid ahaa dadkii ” Fanka dhiddibada u tagay ,”. “Addoon qalbi wanaagsan ayuu ahaa , aabe Soomaaliyeed oo fiican ayuu ahaa, dadkii fankan dhiddibada u taagay ayuu ka mid ahaa, ayay tiri Hibo Nuura.
” Heesta (Laaleys) ayuu ii tumay oo ka mid ah heesihii aan ku soo baxay, ayay intaa ku dartay.
Abwaan Saciid Saalax oo ka mid ah dadka ay sida weyn isu garanayeen abwaan Xudeydi ayaa isna sheegay in qof walba oo macagiisa maqlo uu soo xusuusto shanqarta cuudka.
Sidoo kale, Halkan hoose ka Daawo Muuqaal-dhegaysiga Taariikhda Marxuum Xudaydi:-